Sida loola tacaalo faallooyinka aan habboonayn ee YouTube? - YTpals
Sida loola tacaalo faallooyinka aan habboonayn ee YouTube?
Si kastaba ha ahaatee dadaalka aad geliso abuurista fiidiyowgaaga, had iyo jeer waxaa jiri doona farabadan dad ah, marka lagu daro macaamiishaada daacadda ah, kuwaas oo aan jeclayn shaqadaada. Ma filan kartid faallooyin wanaagsan qof walba. Qof walba kama farxin kartid. Dadkaas qaarkood waxay la iman doonaan faallooyin taban ama aan habboonayn, si ay u muujiyaan khilaafkooda ama hoos u dhigaan sumcaddaada. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo ay abuurayaashu wax uga qabtaan dadka noocaas ah internetka, laakiin waxa ugu faa'iidada badan dhammaan waa goobaha faallooyinka YouTube.
Aaway dejinta faallooyinka YouTube?
YouTube Studio waa meesha aad ka beddesho dejinta faallooyinka YouTube. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa inaadan bedeli karin goobaha faallooyinka haddii
kanaalka ama fiidiyowga waxaa loogu talagalay carruurta (faallooyinka waa la tirtiraa si joogto ah marka goobta loo beddelo "loo sameeyay carruurta")
muuqaalku waa mid gaar ah
waxaad leedahay akoon la kormeero si aad u isticmaasho YouTube.
Sida loo beddelo goobaha faallooyinka ee caadiga ah?
Waxaad bedeli kartaa habaynta faallooyinka YouTube ee caadiga ah si aad uga fogaato faallooyinka aan habboonayn bogga hoyga kanaalkaaga ama fiidiyowyada cusub. Waa kuwan tillaabooyinka la raacayo:
Aad YouTube Studio.
Ka dooro "Settings" ka menu ee dhinaca bidix.
Tag "Community" ka dibna "Defaults."
Dooro dejintaada caadiga ah oo guji "Save."
Waxa kale oo aad tixgelin kartaa in aad beddesho goobaha faallooyinka ee fiidyowga adiga oo raacaya tillaabooyinkan:
Tag bogga macluumaadkaaga, kaas oo muujinaya dhammaan fiidiyowyadaada. Haddii aad rabto inaad beddesho goobta fiidiyowyo badan, waxaad aadi kartaa Tafatirka Bulk.
Ka dooro "Content" ka menu ee dhinaca bidix.
Guji sawirka thumbnail ee muuqaalka
Guji "Options More."
Ka dooro dejinta faallooyinka hoosteeda "Faallo iyo ratings" oo dhagsii "Save."
Maxaa kale oo la qaban karaa?
Beddelidda dejinta faallooyinka YouTube waa hab fiican oo aad isaga ilaalin karto faallooyinka aan habboonayn bogga hoyga kanaalkaaga ama fiidyahaaga. Laakiin maxaa dhacaya haddii faallo ay mar hore ku soo degtay boggaaga? Sidee wax looga qabtaa tan?
Hagaag, waxaad samayn kartaa laba shay oo heer faallo ah. Marka hore, ka saar faallooyinka aan habboonayn iyo dhammaan jawaabaha ay ururisay. Waxaad tan ku samayn kartaa adigoo gujinaya saddexda dhibcood ee ku xiga faallada. Guji "ka saar," oo si joogto ah ayaa loo tirtiri doonaa. Waxaad sidoo kale ka tirtiri kartaa faallooyinka tab "Faallo" ee YouTube Studio.
Waxa xiga oo aad samayn karto waa in aad calaamadiso faallooyinka aan habboonayn. Talaabadani waxay faallada u keenaysaa ogaysiiska YouTube-ka, kaas oo waliba leh hab-raac u gaar ah oo wax looga sheego. Haddi faaladu ku xad gudubto qodobbada Tilmaamaha Bulshada YouTube, markaa waxaad filan kartaa in laga saaro goobta.
Ugu dambeyntii, waa inaad qarisaa isticmaalaha soo dhejiyay faallooyinka aan habboonayn. Markaad sidaa sameyso, isticmaaleha gaarka ah ayaa laga xannibayaa inuu wax tallaabo ah ka qaado fiidyahaaga ama kanaalkaaga. Waxaad ka xannibi kartaa isticmaalaha faallooyinka laftiisa ama tab "Community" ee goobahaaga.
Maxaa xiga YouTube samaynaysaa?
Waxka beddelka goobaha faallooyinka YouTube ayaa faa'iido weyn u ah hal-abuurayaasha macluumaadka, laakiin madalku wax dhagax ah kama tagayo si loo ilaaliyo gaarnimada iyo sharafta bulshadeeda. Dhowaan, YouTube waxay ku dhawaaqday inay la imaanayso muuqaal cusub oo siin doona faallooyinka fursad ay dib ugu noqdaan oo ay dib u eegaan hadaladooda nacaybka ah.
Sifada cusub waxay sidoo kale u badan tahay inay u abuurto shaandheyn abuurayaasha YouTube si ay uga fogaadaan waxyeellada, faallooyinka aan habboonayn. Waa run in abuurayaashu ay ka cawdeen tayada faallooyinka goobta muddo sanado ah. Laakiin qaabka cusubi waa inuu awood u yeesho inuu wax ka qabto welwelkan muddada dheer oo uu ka ilaaliyo abuurayaasha nooc kasta oo dhibaatayn ah oo ka jira goobta internetka.
Dejinta faallooyinka YouTube ayaa kaa caawin kara inaad ka fogaato faallooyinka aan habboonayn ilaa xad. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa inay tahay qayb iyo qayb ka mid ah dhammaan waayo-aragnimada. Waa inaad u furnaataa isticmaalayaasha noocaas ah sababtoo ah waxay ku siinayaan hubin dhab ah oo ku saabsan booska. Ku samir oo la soco shaqadaada wanaagsan.
YTpals ayaa kaa caawin kara inaad ku kobciso kanaalkaaga YouTube macaamiisha YouTube bilaash ah, views, iyo wixii la jeclaa. Maanta nala soo xidhiidh.
Sida loola tacaalo faallooyinka aan habboonayn ee YouTube? waxaa qoray YTpals Writers, 8 December 2021
Fiidiyeyaashaada Fiidiyow Ku Filan Karto YouTube
YouTube waa barxad weyn oo loogu talagalay suuqgeynta fiidiyowga, iyo ganacsiyo badan ayaa ka faa'iideysanaya si ay kor ugu qaadaan sumaddooda. Tartan aad u badan oo ka socda barxadda, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in astaantaadu ay tahay…
Sidee Loola Socdaa Xayeysiinta Funnel Sare ee YouTube-ka?
Runta ayaa ah fiidiyowga oo dhan ayaa loo dejiyey si loo wado mustaqbalka suuqgeynta. Suuqleyda adduunka oo dhan hadda kuma xisaabtamayaan barnaamij kale oo warbaahinta bulshada ah, laakiin YouTube, ololahooda suuqgeynta fiidiyowga. 2019, fiidiyaha-qulqulka…
Sida loo kobciyo bartaada cuntada ee YouTube-ka?
Hada waa waqtiga ugufiican ee laga dacwoodo macaamiisha aad bartilmaameedsato ee ah daawashada xad dhaafka ah, maadaama ay tani tahay markaan saacado wada qaadaneyno wada cunista fiidiyowyada internetka. Kordhinta waxyaabaha fiidiyaha ayaa soo jiitay noocyo badan…